Olana Eran-tany ny Fanavakavahana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA: RAHOVIANA NO TSY HISY INTSONY NY FANAVAKAVAHANA?
DOKOTERA i Jonathan, ary Koreanina teraka tany Amerika. Mbola kely izy dia efa nisy nanavakavaka. Rehefa nihalehibe izy, dia nitady toerana tsy misy olona hanavakavaka azy noho ny endriny na ny volon-kodiny. Nifindra tao amin’ny tanàna iray any amin’ny faritra avaratr’i Alaska, any Etazonia, àry izy. Mba mitovitovy endrika aminy mantsy ny ankamaroan’ireo marary notsaboiny tany. Mangatsiaka be any, nefa naleony niaritra an’izany toy izay hiaritra fanavakavahana.
Nitsabo vehivavy iray 25 taona avy any amin’iny faritra iny anefa izy indray andro. Vao nahatsiaro saina izy io ka nahita ny endrik’i Jonathan, dia fanaratsiana sy teny ratsy no nivoaka ny vavany. Hita hoe efa ela izy no tsy tia Koreanina. Mafy tamin’i Jonathan izany. Toa tsy ho afa-bela amin’ny fanavakavahana izy, na inona na inona hataony. Diso fanantenana tanteraka izy.
Mampalahelo ny zava-nitranga tamin’i Jonathan, nefa tena misy. Misy fanavakavahana na aiza na aiza eto an-tany. Hoatran’ny hoe rehefa toerana misy olona, dia misy fanavakavahana foana.
Mahagaga anefa fa manameloka ny fanavakavahana ny ankamaroan’ny olona. Nahoana àry no miely patrana ny fanavakavahana? Satria maro amin’ny olona tsy tia azy io no tsy mahatsapa akory hoe izy koa aza mba manavakavaka. Sao dia hoatr’izany koa ianao?
INONA NO ATAO HOE FANAVAKAVAHANA?
Sarotra amin’ny manam-pahaizana ny mamaritra an’io teny io. Misy milaza hoe “fankahalana olona izy io, noho izy anisan’ny antokon’olona iray.” Misy indray milaza fa manavakavaka ny olona iray rehefa “tsy ampy ny fanazavana azony, [ka] mitsara an-tendrony an’izay anisan’io antokon’olona io izy.” Na ahoana na ahoana, dia mety hiharan’ny fanavakavahana ny olona iray, noho ny volon-kodiny, habeny, fiteniny, fivavahany, noho izy lahy na vavy, na noho izay mampiavaka azy amin’ny hafa.
MAHAKASIKA NY TSIRAIRAY
Mety ho efa manavakavaka na mitsara an-tendrony isika ao am-pontsika ao, nefa tsy tsapantsika akory. Sarotra mantsy ny mamantatra an’ilay izy. Hoy ny Baiboly: “Mamitaka mihoatra noho ny zava-drehetra ny fo.” (Jeremia 17:9) Mety hamita-tena àry isika ka hihevitra hoe tia ny karazan’olona rehetra. Na mety hanamarin-tena isika ka hilaza fa rariny isika raha tsy tia karazan’olona sasany.
Inona no ho tsapanao raha sendra an’izao ianao?
Ahoana no mety hahalalana raha efa mitsara an-tendrony ianao ao am-ponao ao? Andeha hatao hoe mandeha amin’ny lalana iray ianao, ary efa alina ny andro. Misy tovolahy roa mbola tsy hitanao manatona anao. Toa matanjaka be ry zareo, ary hoatran’ny misy zavatra eny an-tanan’ilay iray.
Hihevitra ve ianao hoe olon-dratsy ireo? Mety ho efa nifanehatra tamin’ny olon-dratsy ianao, ka tsapanao hoe tokony ho mailomailo ianao. Midika ve anefa izany fa tsy maintsy ho olon-dratsy ireo tovolahy ireo? Angamba ianao tonga dia nieritreritra hoe avy amin’ny foko izao ry zareo na hoatr’izao ny volon-kodiny. Tsy tonga dia hampiharihary izay ao an-tsainao ve izany? Mety ho hita avy amin’izany hoe efa mitsara an-tendrony ianao na manavakavaka.
Raha mandini-tena amin’ny saina tsy miangatra isika dia hiaiky hoe samy mitsara an-tendrony daholo, fa tsy mitovy fotsiny ny fomba fisehony. Na ny Baiboly aza milaza hoe: “Tsy mba mitsara toy izay ataon’olombelona [Andriamanitra]. Ny olona mijery ivelany fotsiny ihany.” (1 Samoela 16:7, Dikan-teny Iombonana Eto Madagasikara) Mora mitsara an-tendrony isika rehetra, ary tena ratsy ny vokatr’izany matetika. Afaka miala amin’izany ve anefa isika? Tsy hisy intsony ve ny fanavakavahana na ny fitsarana an-tendrony indray andro any?
Kanada: “Avelan’ny fanjakana hipetraka any ny olona samy hafa fiaviana, ary efa misy lalàna miaro ny zon’izy ireny. Mbola tsy voahaja foana anefa ny zon’olombelona satria mbola manjaka ny fanavakavaham-bolon-koditra any.”—Tatitra nataon’ny Fikambanana Mpiaro ny Zon’olombelona momba an’i Kanada, tamin’ny 2012.
Eoropa: “Milaza ny 48 isan-jaton’ny Eoropeanina fa tsy dia misy ezaka atao hamongorana ny fanavakavahana any amin’ny taniny.”—Fanavakavahana, Fitsarana An-tendrony: Tatitra Momba An’i Eoropa, tamin’ny 2011, anglisy.
Afrika: “Mbola iharan’ny herisetra sy ny fanavakavahana foana ny vehivavy, any amin’ny firenena maro.”—Tatitry ny Fikambanana Mpiaro ny Zon’olombelona, 2012, anglisy.
Népal: “Iharan’ny fanavakavahana ny Dalits (Hindoa ambany saranga), indrindra eo amin’ny resaka toe-karena sy sosialy ary kolontsaina.”—Tatitra Momba ny Zon’ny Olona Eran-tany, tamin’ny 2012, anglisy.
Eoropa Atsinanana: “Mafy ny mahazo ny foko Rôma any Eoropa Atsinanana. Endrikendrehin’ny olona izy ireo any an-tany hafa, ary misy manavakavaka ao amin’ny taniny. Tsy misy manam-pahefana te hanampy azy ireo mihitsy.”—Toe-karena (anglisy), 4 Septambra, 2010.